မီးနေသည်တွေဟာ ဘာကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့လာသလဲ? – BurmeseHearts
မီးနေသည်တွေဟာ ဘာကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့လာသလဲ?
မြန်မာမိသားစုတွေက ရှေးရိုးယုံကြည်မှုအစွဲတွေနဲ့ အစားအသောက် ရှောင်ကြတဲ့ဓလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးကိုယ်ဝန်ဆာင်မှသည် ကလေးနို့တိုက်ကျွေးတဲ့မိခင်တွေဟာ ဟိုလူက ဒီဟာမစားနဲ့ ၊ ဒီလူက ဟိုဟာမတည့်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေအပေါ် နားယောင်ပြီး ဒီဟားလည်းရှောင် ၊ ဟိုဟာလည်းရှောင် လုပ်ရာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်မိခင်များ ၊ ကလေးမိခင်များဟာ အာဟာရဓါတ်ချို့တဲ့မှု ဖြစ်လာပါတယ်။
Myanmar videoမီးနေသည်နှင့် မိခင်များ
မိခင်နို့ရော ၊ နို့ဗူးရော တိုက်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက် ဘာသိထားသင့်သလဲ?
နို့စို့ကလေးငယ်တွေ ဘာကြောင့် အာဟာရချို့တဲ့လာသလဲ?
ကလေးကို ဂလူးကို့စ်တိုက်လို့ အားပိုဖြစ်သလား?
Chicken Essence လို့ခေါ်တဲ့ (ကြက်ပေါင်းရည်ပုလင်း)ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကြက်ပြုတ်ရည်နဲ့ ကြက်သား ဘယ်ဟာကပိုအာဟာရပြည့်မလဲ?
လိပ်ဥ ၊ လိပ်သားစားရင် အနာကြီးရောဂါဖြစ်တတ်သလား?
BurmeseHearts	 Feb 12, 2016 0
မိခင်လောင်းများ သိကောင်းစရာ အပိုင်း(၁)
ကလေးသူငယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု နှင့် သင်ယူမှုပိုင်းဆိုင်ရာ
မိဘတွေရဲ့ ကလေးအပေါ် နေ့တဓူဝ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေက ကလေးကို ဘာသင်ပေးလိုက်သလဲ?
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကို ဘာကြောင့် စင်စင်ဆေး (သို့မဟုတ်)…
ဘာကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် မိမိကိုယ်ဝန် ပြသသင့်သလဲ?
မောင်တထမ်း ၊ မယ်တရွက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်လောင်းများ ရင်ပူခြင်း / အစာမကြေခြင်း…
သုံးလမှ လေးလအရွယ် ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
မွေးကင်းစကလေးရဲ့ ဦးထိပ်က ဦးရေပြားဟာ ဘာကြောင့် ပျော့စိစိဖြစ်နေသလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အော့အန်ခြင်းတွေကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး ခံစားရသလဲ?
ကလေးငယ်တို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှု အဆင့်ဆင့်
Down syndrome ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ?